eNasha.com - जन्मदिनमै करोडपति
वास्तवमै लोग्नेमान्छेको भाग्यका बारेमा कसैलाई थाहा नहुँदो रहेछ ! हिजोसम्म कंगालपति भनेर चिनिएका एक बेलायती नागरिकले स्वर्गको बाटो तताउने बेलामा चाहिँ पैसाको सुख पाएका छन् । उनले सोच्दै नसोचेको रकम उनले आफ्नो ६० औँ जन्म दिनको अवसरमा हात पारेका छन् ।
उनले गएको साता मात्र लगभग एक डलरको बाजी थापेका थिए, त्यो पनि एउटा घोडा दौडमा । तर दिन ढल्ने बित्तिकै उनी अकस्मात करोडपतिको सूचिमा दरिए । किनभने उनले त्यो घोडा दौड मज्जाले जिते ।
अहिले ६० औँ जन्मदिन मनाएर खुशीसाथ उत्तरी बेलायतको योर्कसायरमा बसिरहेका फ्रेड क्र्याग्सले पैसा जितिसकेपछि पनि उनले थाहा पाएका थिएनन्, उनी करोडपति बने भनेर । तर जब उनले बाजी थापेको संस्था विलियम हिल भन्ने बाजी थाप्ने संस्थाले उनलाई बोलायो, उनी चकित परे ।
उनलाई संस्थाले तत्काल करोडपतिको जस्तो व्यवहार गर्‍यो र पैसा जितेको बतायो । उनले तब पैसा लिनुको साटो यो खबर गएर श्रीमतीलाई भन्न रुचाए । श्रीमती उचालिएर खुशी भएपछि मात्र उनलाई विश्वास भयो, कि वास्तवमै हामी धनी भएछौँ । हाम्रा दुःखका दिन गएछन् ।
सन् १९६१ मा दर्ता भएको यो बाजी लगाउने संस्थाले दुइ शीर्षकमा बाजी थाप्ने गरेको छ । एउटा शीर्षक "इजन्ट द्याट लकी" र अर्को "अ ड्रीम कम ट्रु" रहेका छन् । जसअन्तर्गत कहिलेकाहीँ करोडपति झनै करोडपति हुने गरेका छन् भने कहिले चाहिँ रोडपति नै करोडपति हुने गरेका रोयर्टस समाचार संस्थाले जनाएको छ ।
यस्तो पनि ! श्रीमानश्रीमती माया सुन्दरी बलिउड गुगल मुद्दा मामिला मूर्ख्याइँ सेलेब्रिटी इन्टरनेट भव्यता विज्ञापन प्रविधि कीर्तिमान परिस्थिति नग्नता उपाय हलिउड फट्याइँ सेक्स